Izindaba - Nge-Greenhouse Fogging Sprayer….Ingabe Umbono Omuhle Noma Cha?
Ingabe udinga ukuqeda omiyane endaweni enkulu ngokwanele?Ingabe ufuna ukukwenza ngokushesha, ngemiphumela ehlala njalo?I-mosquito fogger iyindlela enhle yokwenza lokho kanye.Inikeza imiphumela emihle ngokubulala omiyane nokulawula izinambuzane ezihlangana nenkungu.Ngemva kwalokho, zingakwazi nokuxosha ezinye izinambuzane, ukuze zingangeni egcekeni lakho futhi zikuhluphe.
Omiyane abahlali emagcekeni ethu kuphela, noma kunjalo.Bathanda nendawo efudumele, enomswakama ehlinzekwa yizindawo zokugcina izithombo.Ingabe ukusebenzisa ama-fogger omiyane ezindlini zokugcina izithombo kuphephile futhi/noma kunempilo?Uma kunjalo, yiziphi izinzuzo zokwenza kanjalo?Ake sithole izimpendulo zale mibuzo!
Kungakhathaliseki ukuthi kungenxa yomiyane nanoma yisiphi esinye isinambuzane noma izinambuzane, ukuthi kuphephe kangakanani ukusebenzisa i-fogger ezindlini zokugcina izithombo kuzoncika ngempela ukuthi iyiphi insecticide noma isibulala-zinambuzane oyisebenzisayo.
Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi i-insecticide oyikhethayo iphephile ukuyisebenzisa ku-greenhouse yakho nasengadini yakho.Ngakho-ke, khetha leyo ebhalwe njengesibulala-zinambuzane noma isibulala-zinambuzane esizosetshenziswa engadini yakho.Ungathatha futhi isibulala-zinambuzane semvelo noma isibulala-zinambuzane.Lezo zizophepha nakanjani ukuzisebenzisa eduze kwanoma yimiphi imifino, izithelo, amakhambi noma ezinye izitshalo ozitshala ku-greenhouse yakho.
Ngokuqondene nesifutho esikhishwa yi-fogger, naso, siphephile ukusisebenzisa eduze kwezitshalo ezahlukene.Ukusebenzisa i-fogger kusho ukuthi isixazululo sizophuma njengenkungu futhi ngeke silimaze izitshalo zakho.
Kungaba nzima kakhulu ukulawula izinambuzane nezinambuzane endaweni ebamba ukushisa.Izindlu ezibamba ukushisa ngokuvamile azinkulu kakhulu futhi zakhiwe ngendlela enikeza izinambuzane nezinambuzane ezihlukene izindawo eziningi zokucasha.Lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukunakekela i-greenhouse engenazilokazane nezinambuzane.
Ukusebenzisa izibulala-zinambuzane noma ama-insecticides nge-fogger kuzokuvumela ukuthi uphathe zonke izingxenye ze-greenhouse, kufaka phakathi yonke i-nook ne-cranny.Le fogger iqukethe amaconsi amancane angangena kalula ngisho nasezimfaneni ezincane kakhulu.Lokho kwenza i-fogger indlela ephumelela kakhulu yokusabalalisa isibulala-zinambuzane noma isibulala-zinambuzane kuzo zombili izindawo ezinkulu nezincane ezigcwele izithiyo.
Iyiphi i-fogger okufanele ngiyisebenzise?
Uma kukhulunywa ngama-foggers we-greenhouses, lokhu kusho izikhala ezincane.Ngakho-ke, kufanele ucabange nge-fogger engaletha amaconsi amancane kakhulu ngangokunokwenzeka.Lokhu kusho ukuthi i-ultra-low volume (ULV) fogger ebandayo noma i-thermal fogger cishe kungaba ukubheja kwakho okuhle kakhulu.Lawa ma-fogger angakhipha izinhlayiya ezincane kakhulu, aqinisekise ukuthi isibulala-zinambuzane noma isibulala-zinambuzane sivala zonke izindawo ezisendlini yakho ebamba ukushisa futhi singena emifantwini emincane kakhulu.
Kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa i-fogger ukuqeda izinambuzane ku-greenhouses.
Inqubo yokufaka inkungu ishesha kakhulu kunenye indlela, okungaba ukukha ngesandla izinambuzane ku-greenhouse yonke.I-Foggers futhi inikeza imiphumela engcono kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, i-fogger iphinde ikhawulele ukuthi ungakanani isibulala-zinambuzane noma isibulala-zinambuzane osisebenzisayo ngesikhathi sokwelashwa.Lokhu kukusiza ukuthi ube ne-eco-friendly futhi kuqinisekisa ukuthi indlu yakho ebamba ukushisa ayitholi isibulali-zinambuzane ngokweqile.
I-fogger izophinde iqinisekise ukuthi izibulala-zinambuzane noma inkungu enezibulala-zinambuzane ayivali nje phezulu kwezitshalo kodwa nangaphansi.Lokhu kuzovimba noma iziphi izinambuzane ekuzifihleni ngaphansi kwamahlamvu kanye nokwelashwa okusaphila.
Ingabe zikhona izithiyo?
Nokho, kunezinto ezimbalwa ezingase zikwenze ucabange kabusha ngesinqumo sakho sokusebenzisa i-fogger ku-greenhouse yakho.
Lezi zithiyo zihlanganisa iqiniso lokuthi ama-foggers azovame ukushiya izinsalela ku-greenhouse yakho.Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma usebenzisa isibulala-zinambuzane esekwe ngamafutha noma isibulala-zinambuzane.Futhi, akuzona zonke izixazululo ezisebenza kuzo zonke izinambuzane nezinambuzane.Ngakho-ke, ungase udinge ukufaka inkungu ngezixazululo ezimbalwa ezihlukene zenkungu ukuze uqede zonke izinambuzane nezinambuzane zakho ezahlukene.